Ihe Jason Falls dere na Martech Zone |
Edemede site na Jason Falls
Jason Falls bụ SVP maka Digital Strategy na Elasticity, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke nwere ọfịs na St. Louis, Chicago na Louisville. Ya bụ onye edemede nke akwụkwọ abụọ na ahịa dijitalụ, onye na-ekwu okwu ugboro ugboro na isiokwu ahụ na onye nyocha nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Jikọọ na ya na jasonfalls na ọtụtụ netwọk mmekọrịta.
Ebe nchọta Job dị otu iri na abuo. Enwere ọtụtụ n'ime ha ole na ole n'ime ha ọbụna na-anwa ịkọwa ọdịiche dị iche site n'ikwu na ha bụ, "eHarmony" maka ọrụ. Dabere na Dr. Neil Clark Warren, onye guzobere eHarmony, “Ha abụghị.” Ugbu a ụlọ ọrụ ya nwere ngwaahịa legit iji gosi ya na ọ bụ ụzọ mara ihe na ọkaibe karịa ka ị nwere ike iche. Warren na ndị otu ngwaahịa ya kwalitere Elu Ọrụ site na eHarmony in